FAAL - iftineducation.com
Faalka iyo maryanadu waa tabo loola jeedo in lagu ogaado wax yaalo aan hubin. Faalku waa tiro midba in tahay oo laga tiriyo tusbaxa iyo quruuruxa. Waxaa kaloo jira xarriiqyo dhulka lagu xarriiqo. Maryanadu waa kuusha haweenka oo la weeraamiyo.
Waxaa la arkaa in qof cudur faalkiis la waayay ku dhaco. Waxaa kaloo la arkaa in la doono nin u faaliya ama habar u maryaneysa. Inta badan faalka iyo maryanaduba waxay sheegaan wax qofka buka u roon. Maxay ku noqotay? Waxay ku noqotay faalka iyo maryanaduba qofka yaqaani waa ku xoogsadaa. Kolka haddii uu sheego wax qofka buko ka nixiyo, wuxuu ka baqayaa inaan wax la siin.
Badanaa kuwa faaliya dadka wax u keensada oo been bay ku maaweeliyan. Waxaa suurowda qofka inow la buko cudur fudud oo qalid u baahan sida kolanta caloosha ku taal. Kolantu waxay ku siman tahay in qofka buka lajeexo oo laga gooyooo uu dubaba biskoodo. Waxaa suurtoowda in faalkiisu yiraahdo, wofka waxaa u dawa ah orgi cad oo afarta qoob madow oo inta fiidkii la qalo dhiigga iyo uuska la mariyo qofka. Waxaa la yiraahdaa nin buka boqol u taalisay.
Waxaa la arkaa in orgigii la helo oo dhiigiisa iyo uuska la mariyo. Isla kolkaas, waxaa suurowda in qofka inta kolantii ku dillaado naftu duurba ka baxdo. Haddii faaliyaha la weydiiyo waxa dhiiggii iyo uuskii wax u daweyn waayeen, waxaa suurtowda inuu yiraahdo qofkii gowracay ayaa ahaa qof xun.
Bal u fiirsada oo maxaa isugu jira bugtada kolanta iyo orgiga cad oo qoobabka madow iyo xumaanta qofka orgiga gawracay.
Faalka ma rumeysan laheyd wuxuu kuu sheego?
Dadka faaliyaadhibaato maxey u geystaan xaasaska dadkeyna?
Iska key Illow (Qiso Jaceyl oo xiiso badan) Qeybtii 2-aad